अन्य परियोजनाहरु | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: अन्य परियोजनाहरू
मलाई भन्नुहोस्, यदि सहपाठीमा म बटनमा क्लिक गर्छु - सन्देश मुनि लुकाउनुहोस्, म तिनीहरूलाई पछि कसरी देख्न सक्छु?
मलाई भन्नुहोस्, यदि सहपाठीमा म बटनमा क्लिक गर्छु - सन्देश मुनि लुकाउनुहोस्, म तिनीहरूलाई पछि कसरी देख्न सक्छु? कुनै पनि हुलाक कार्यालयबाट सबै पत्राचार हेर्न छोटो छ। लुकेको पत्राचार बहाल गर्न ...
कसरी मेलमा व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने?
मेल रूमा मानिसका लागि कसरी खोजी गर्ने? मेनूमा खोज्नुहोस् मेरो संसार सफार salmanov@mail.ru पहिले तपाईले मेरो विश्व बनाउनु पर्छ, र खोजीमा जानुहोस्। म आर्टेम मालत्सेभसँग सहमत छु। मैले उसलाई राखें ...
PIN कोड वर्डफेस
पिन कोड warface महान समाचार यो साइटले मलाई केवल imvu क्रेडिट कोड दिए र म विश्वास गर्न सक्दिन कि यसले वास्तवमा काम गर्यो! मैले यो http://imvucreditsgenerator.com मा खरीद गरेको छु यदि तपाईं क्रेडिटहरू आउन चाहनुहुन्छ भने ...
एक अवतारमा छिटो पूर्ण कार्यहरू कसरी
कसरी अवतारमा कार्यहरू छिटो पूर्ण गर्न सकिन्छ सजिलै आफैंलाई प्रदर्शन गर्नुहोस्, तर तपाईका लागि सुनका लागि गाह्रो (यदि कुनै छ भने) सुनका लागि एडलाईन एटीपी! अवतारमा, त्यहाँ त्यस्तो कुनै कार्य वा त्यो छैन - ...
Cloud@mail.ru के यो प्रयोग गर्ने हो र यो नि: शुल्क छ?
क्लाउड@मेल.रु के हो यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र यो नि: शुल्क हो? क्लाउड एक नि: शुल्क सेवा हो (कुनै पनि मेल।रू उपयोगकर्ताले क्लाउडमा १०० जीबी खाली ठाउँ पाउँछ।), जसले तपाईंलाई भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ र ...
कुन वर्षमा सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कमा आयो?
सामाजिक नेटवर्क VKontakte कुन वर्ष देखा पर्‍यो? २०० year सालमा !!! हो, २०० in मा। VK अब कति समय सम्म अवस्थित छ? यहाँ http://timemit.net/index.php?name=timersamp ;op=viewamp ;id=2006 तपाइँ सामाजिक नेटवर्क को निर्माण को सही समय पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र ...
ब्राउजर एकोगोबाट विज्ञापनहरू कसरी हटाउने? सेटिङमा यस्तो सेवा छ?
एमिगो ब्राउजरबाट विज्ञापनहरू कसरी हटाउने? त्यहाँ सेटिंग्स मा यस्तो सेवा छ? ठीक छ, म तपाईंलाई एसेट अनलाइन स्क्यानर प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु, यद्यपि धेरैले उसलाई केही कारणहरूले गाली गर्छन्, तर जे भए पनि यो वास्तवमै गर्न सक्दछ ...
पृष्ठलाई सहपाठीहरूमा ब्लक गरियो। अनलक कसरी गर्ने?
सहपाठीमा पृष्ठ अवरुद्ध छ। कसरी अनब्लक गर्ने? मेरो उत्तरमा जानुहोस्। त्यहाँ थप विवरण छ। र लिंकहरूको साथ। यदि पृष्ठ मध्यस्थकर्ता द्वारा ब्लक गरिएको छ, तपाईंले ब्लक गर्नुको कारणहरूको वर्णन गर्न अनुरोध सहित उसको ठेगानामा पत्र लेख्नु पर्छ ...
कुन वर्ष ए.एस.
१ year1837, जनवरी २ 27 - ए.एस. पुष्किनको मृत्यु कुन वर्षमा भयो - पुष्किनले आफ्नी श्रीमतीको सम्मानको रक्षा गर्दै फ्रान्सेली आप्रवासी जे। दान्तेससँग द्वन्द्व लडे। १1837, जनवरी २ - - चार बीचको ...
फोटो-देशमा कसरी पृष्ठ मेटाउने?
कसरी फोटोकन्ट्रीमा पृष्ठ मेटाउने तपाईं सेटिंग्समा आफैलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ, तर साथीहरूसँग के गर्ने जो निधन भयो, तर त्यहाँ पृष्ठहरू छन्। तपाईं देशको फोटोबाट प्रोफाइल मेट्न सक्नुहुन्न ...
मलाई फोन समर्थन मेलको फोन नम्बर बताउनुहोस्
मलाई समर्थन सेवा मेलको फोन नम्बर बताउनुहोस्। ई-मेल ह्याक गरियो कसरी पुन: भण्डार गर्ने यदि फोन नम्बर जुनमा दर्ता अवस्थित छैन !? मेरो खाता मेरो दुनिया ब्लक गरिएको छ क्विवी वालेट एक जादुगर हैन ...
प्रमाणीकरण हो कि?
प्रमाणीकरण भनेको के हो? अडिटि ... हो ... http: //ru.wikedia.org/wiki/RRSRRRSRS: RSSRSRSRSRRRRSRS के गर्ने। प्रमाणीकरण L9; राशन (इन्जी। प्रमाणीकरण) उहाँद्वारा प्रस्तुत परिचयकर्ताको पहुँचको विषयको सम्बन्धित प्रमाणीकरण; प्रमाणिकरणको पुष्टिकरण। १ प्रमाणीकरण पहिचानको साथ भ्रमित गर्नु हुँदैन। प्रमाणक - ...
कसरी सहपाठीहरूमा बन्द प्रोफाईल बनाउन, ताकि बाहिरका व्यक्तिहरूले पृष्ठ हेर्न सक्दैनन्?
सहपाठीहरूमा कसरी निजी प्रोफाइल बनाउने ताकि बाहिरी व्यक्तिहरूले पृष्ठ अवलोकन गर्न सक्दैनन्? मसँग एक निजी प्रोफाइल सेवा छैन। यदि तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरू तपाईको खोज्नको लागि चाहानु हुन्न भने ...
र यदि "सहपाठीहरू" अदृश्य पृष्ठमा जान्छन्, व्यक्तिले देख्न सक्दछ कि "अदृश्य" भित्र आयो?
र यदि "सहपाठीहरू" मा तपाईं अदृश्य पृष्ठमा जानुहुन्छ भने, व्यक्तिले देख्न सक्दछ कि "अदृश्य मानिस" प्रविष्ट भएको छ? साथीहरू जो साइटमा छन् पृष्ठको छेउमा छैनन्, तर तल र तिनीहरूलाई हेर्न, तपाईं सबैलाई चाहिन्छ ...
अवतारमा धेरै पैसा र सुन कसरी कमाउने? अवतार
कसरी अवतार मा धेरै पैसा र सुन बनाउन? अवतार मानिसहरु म चकित भएँ .. त्यहाँ नि: शुल्क सुन प्राप्त गर्ने कार्यक्रम छ! यो धेरै सरल छ! र कुनै गाह्रो छैन! सामान्यतया, पुरस्कार पनि राम्रो छन् ...
Cloud@mail.ru बाट सामाग्री कसरी डाउनलोड गर्ने?
Cloud@mail.ru बाट सामग्रीहरू कसरी डाउनलोड गर्ने? दुर्घटनावश क्लाउडमा फोटो सहितको फोल्डर मेटाईयो, मैले के गर्नुपर्छ ???? केवल क्लाउडमा इच्छित फाइलको प्रतिलिपि गर्नुहोस् इच्छित फाइल चयन गरेर र "क्लाउडमा बचत गर्नुहोस्" बटन क्लिक गरेर, ...
कसरी सहभागितामा स्थिति राख्नुहुन्छ
कसरी सहपाठीहरुमा स्थिति सेट गर्ने सहपाठीहरु मा स्थिति कसरी सेट गर्ने? स्थिति पृष्ठ पानामा तपाईंको फोटोको माथि एउटा सानो पाठ सन्देश हो। नेटवर्कहरूमा तपाईंको चरित्र व्यक्त गर्ने तरीकाको रूपमा स्थिति प्रयोग गरिन्छ।
नयाँ डिजाइन कसरी स्विच गर्ने?
कसरी नयाँ VK डिजाइनमा स्विच गर्ने? १) समर्थनका लागि लेख्नुहोस्: vk.com/help २) शीर्षक थप्नुहोस् पुन: डिजाइन http://new.vk.com/blog मा पहुँच पहुँचको परीक्षणको लागि तलको बटन क्लिक गर्नुहोस्। वा समस्याको साथ समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ...
"क्लाउड" मार्फत एक व्यक्तिमा फाईलहरू कसरी मेलमा हस्तान्तरण गर्ने?
"क्लाउड" मार्फत एक व्यक्तिमा फाईलहरू कसरी मेलमा हस्तान्तरण गर्ने? पहिलो, फाईलहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। हामी आवश्यक फाइल वा फोल्डरमा टिक लगाउँछौं, र पृष्ठको दायाँ पट्टि देखा पर्दछ: "सार्वजनिक साझेदारी गर्दै ...
भिडियोलाई कम्प्युटरमा कसरी डाउनलोड गर्ने?
कहाँबाट कम्प्युटरमा भिडियो डाउनलोड गर्ने? mail.ru बाट? हामी भिडियोमा लि take्क लिन्छौं, उदाहरणका लागि http://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/29.html केहि हामीले परिवर्तन गर्ने http://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/v-29.flv अपलोड गर्नुहोस् विस्तार विस्तार र v थपियो - इन्टरनेट बाट भिडियो डाउनलोड? सजिलो! यी सबै भिडियोहरू, यदि तपाईं ...
57 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,437 प्रश्नहरू।